Guangdong Prostar okusha Energy Technology Co., Ltd. (igama elidala inkampani:. Foshan Prostar Isayensi nobuchwepheshe Development Co., Ltd) kuyinto ibhizinisi ngokuhlanganyela kwezimayini US, Taiwan kanye Mainland China njengoba kungabantu abangaphezulu kuka iminyaka eminingi yokukhiqiza kanye nokuhweba nesipiliyoni .
Prostar UPS lamiswa ngo-1998, ngokukhethekile ukuklanywa zokukhiqiza high OEM kanye Prostar brand siqu yemboni Uninterruptible Ukuphakelwa Kukagesi (UPS), Amandla inverter, panel Solar, Solar Power System kanye Amandla omoya uhlelo isizukulwane, futhi eziphuthumayo Ukuphakelwa Kukagesi ( EPS) kanye nokugcinwa-ikhulule isikhala sokulondoloza sekhompyutha amabhethri.
Prostar has a Design abanolwazi kakhulu kanye nasemathubeni uMnyango Ucwaningo abasebenza eduze namakhasimende nentuthuko yabo umkhiqizo kanye aklame yanda Prostar brand ezahlukene. Okunye ukwahlukana zihlanganisa Quality Control Centre, uMphathi & Production Centre, futhi Sales and Service kwamakhasimende Centre.
Prostar ngokuphelele obhekene ukuthuthukiswa kwebhizinisi nensizakalo Mainland China. Through kweminyaka eyishumi imizamo emikhulu, Prostar wenze iphosta uphawu uchungechunge segezi namabhethri asetshenziswa kabanzi emkhakheni ezezimali, Telecom, amandla kagesi, uphethiloli amakhemikhali nokusebenzelana kwawo, ezezimali kanye intela ye-China, futhi ehloniphekile waphawula amaklayenti. Ukuthatha nokwenza imikhiqizo esezingeni lomhlaba nge sengqondo efanele oqotho njengoba umthwalo walo, Prostar ephikelela cwaningo njalo nemibono emisha ukuba alwele anyukele esiqongweni entsha umsebenzi. Thina ngokuziqhenya unamathele umoya "Ubuqotho, Cooperation, ukuncintisana kanye Ukudala".
Guangdong Prostar okusha Energy Technology Co., Ltd. possesses abanolwazi izisebenzi eziningi lobuchwepheshe, futhi bonke abasebenzi bethu sengathi kuncike professional ukuqeqeshwa lobuchwepheshe kanye luhlolo. Prostar wadlula ubuqiniso ISO9001, ISO14001, CE, RoHS futhi IQNet (amazwe emhlabeni wonke amalungu omkhaya angaphezu kuka-30). I okuqinile futhi ngokucophelela izinga ukuphathwa unika amaklayenti ukuzethemba okukhulu. Iminyaka, imikhiqizo Prostar uphawu kuthiwa esakazwa yonke iYurophu kanye Affrica, e-Oceania, eNingizimu-mpumalanga Asia, i-Ningizimu Melika naseMpumalanga Ephakathi.
Through ukuhlanganiswa kanye nokwenza kwezinsiza, Prostar gxila esifundweni ukuhlela amasu ka Quality, Isakhiwo, Marketing, Fashion Nokusungula. Egcina isimiso 'Customer Nokukholakala Okokuqala ", siyakholwa ukuthi nokwenza kahle izinga kahle yilona imfuneko yegoli wethu oyinhloko ukwaneliseka amakhasimende. Simema wonke amakhasimende ethu ukuze asisekele futhi besebenza ndawonye ukufeza inzuzo kithi nakuye. Abazithobayo Ngethemba singaba isevisi kuwe esikhathini esizayo esiseduze! Mayelana nemibuzo, ungasithumelela i-email ku-info@prostar-cn.com.